Uncedo inkqubo XMailer v3.0
Kulula kwamathuba emisebenzi kwaye ngokukhawuleza ukwazisa.
Yonke into phantsi ulawulo
I-convenient ujongano ivumela ukuba ulawulo zonke stages ka-unikezelo.
XMailer isixhobo kuba elinolwazi-imeyili apha: intengiso
Unikezelo kuba zonke
Ukuqala luhlu kufuneka kuphela ikhompyutha nokusebenzisa XMailer
Kwaphuhliswa ngokusekelwe amava edlulileyo iinguqulelo zethu isicelo.
Olukhawulezayo kwaye kulula ekudalweni elinolwazi amaphetshana entsha umhleli.
I-eyodwa iteknoloji ka-bypass i-spam amacebo okucoca kuba inkulu mailings.
Inkqubo proizvoit kwincwadana kunye okubhaliweyo kwaye beautiful umboniso imiyalezo (ifomati .jpeg), evumela sicace kwaye kakuhle indlela ukuthutha ulwazi kwi abamkeli.
Anamandla yangaphakathi ukuzalisa lwenkqubo ye amaxesha ngamaxesha uhlaziyo lomgaqo-software kuvumela ukuba bypass SPAM amacebo okucoca zonke i-imeyili iindlela, nkqu ezifana MAIL.RU, YANDEX.RU kwaye GMAIL.COM.
Asikholwa ukukhuthaza okanye ukukhuthaza ithumela ka-SPAM kunye negalelo kwaye uzame uncedo njengoko abaninzi ishishini abameli anqwenela yazisa zabo abathengi abo nikela ezinolwazi e-mail kwincwadana.
Ngenxa yokuba SPAM amacebo okucoca musa ukunikezela isakhono kuwanikezela identical i-imeyile imiyalezo kangangoko kuyimfuneko, sino kwaphuhliswa kwasetyenziswa zethu inkqubo elinye algorithm ka-ukuthumela iileta, nto leyo eza kuvumela ukuthumela na imiyalezo amakhulu amawaka iibhokisi zeposi!
Abaninzi abameli ka-organizations sele appreciated i-simplicity kwaye ukusebenza zethu imveliso, siyathemba ukuba uza ngathi! Ingqwalasela! Bonke uxanduva SPAMMING umsebenzisi kuvele!
Ujongano XMailer I-3.0